Wararkii u dambeeyay Ciidanka Kumaandooska oo howlgal ku dilay Saraakiil Al-Shabaab, xilli uu shir u socday - Jowhar Somali Leader
Home Somali Wararkii u dambeeyay Ciidanka Kumaandooska oo howlgal ku dilay Saraakiil Al-Shabaab, xilli...
Wararkii u dambeeyay Ciidanka Kumaandooska oo howlgal ku dilay Saraakiil Al-Shabaab, xilli uu shir u socday
Ciidamada Kumaandooska Xoogga dalka ee DANAB ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaan 50KM u jira degmada Bu’aale ee Gobolka Jubadda Dhexe waxay ku dileen Saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo shir u socday.
Sida ay shaacisay warbaahinta dowladda oo soo xigatay Taliyaha Guutada 16aad ee DANAB, waxaa uu howlgalkan ka dhacay deegaanka Carrabow oo ka tirsan degmada Bu’aale.
Taliyaha Guutada 16aad ee DANAB G/lle Ismaaciil C/maalik Maalin ayaa sheegay inay burburiyeen goobta ay weerarka ku qaadeen ee ay ku shirayeen Saraakiisha Al-Shabaab, isla markaana khasaare culus la gaarsiiyay.
Waxaa uu intaa ku daray in weerarkaas qorsheysan lagu dilay sarkaal sarkaal oo mid ka mid ah uu ahaa ajnabi u dhashay dalka Maali, oo lagu magacaabo Abuu Ayman.
Taliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in labada sarkaal ee kale oo ahaa Soomaali ay magacyadooda dib ka soo sheegi doonaan, isagoo intaa ku daray in sidoo kale howlgalkaas lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo goobta ilaalo ka hayay.
Ma jirto war ka madax banaan sheegashada Sarkaalkan oo laga helay dhinacyo kale, sidoo kale ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo aan looga baran inay ka hadlaan weerarada ay fuliyaan Ciidanka Mareykanka iyo Kumaandooska Soomaaliya.